Miady Amin’ny Fanoherana Amin’ny Fanaovana Vakisiny Miaro Amin’ny Lefakozatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2015 9:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, فارسی, Deutsch, русский, 日本語, English
Sary avy amin'ny Radio Tnn. Nahazoan-dalana.
Nosoratan'i Nadir Jailani hoan'ny Balochistan Point ity lahatsoratra ity ary nasiam-panovana kely sy navoakan'ny Global Voices indray rehefa nahazoana alalana.
Mandondona isam-baravarana ao Killi Shakar Khan Quetta i Sajida Bibi mba hanontany raha toa ka misy ankizy latsaky ny dimy taona ao an-trano. Amin'ny fihetsika manaja, miditra izy, manongotsongo ny talokaky ny ankizy ary manindry ilay tavoahangy kely plastika, mandraraka in-telo mitete amin'ny vaksiny miady amin'ny lefankozatra izy ary manamarika ny vaksiny amin'ny markera eo amin'ny ankihikely alohan'ny hifindrana amin'ny varavarana manaraka.
Raha mitety isam-baravarana izy manao vaksiny ireo ankizy an-jatony isan'andro, misy olona roa hafa miaraka aminy: polisy roa an'i Balochistan no manaraka azy miaraka amin'ny basy AK-47 sy fitaovam-piarovana amin'ny loza.
Tolon'i Pakistan hiadiana amin'ny lefakozatra izany. Iray amin'ireo firenena telo aorian'i Afghanistan sy Nizeria ahitana ny otrik'aretina lefakozatra mbola manjaka ao amin'ny taniny i Paksitan. Nanomboka tamin'ny taona 1993 tamin'ny alalan'ny Fandaharan'asa Androm-pirenena hoan'ny vaksiny (NIDs) tao Pakistan ny hetsika fiadiana amin'ny lefakozatra ary mbola mitohy ankehitriny
Fivoarana vao haingana na dia izany aza ny fisian'ireo mpiambina mitam-piadiana amin'ny hetsika. Nananosarotra ny fizotry ny fanaovana vakisiny ireo fanafihana nikendry ireo mpiasa ifotony ary nahatonga izany ho asa mampidi-doza. Nikendry ireo mpiasa miady amin'ny lefakozatra ireo vondrona mpikomy ara-pivavahana izay mandray azy ireo ho mpitsikilo miafina. Araka ny tatitry ny haino aman-jery, olona maherin'ny 60 no namoy ny ainy tao anatin'ny hetsika fiadiana amin'ny lefakozatra tao Pakistana hatramin'ny taona 2012.
“Mahatsiaro matahotra aho na dia eo aza ny polisy manodidina ahy” hoy i Sajida Bibi tamin'ny mpanoratra ity lahatsoratra, nilaza izy fa tsy manam-pikasana hampidi-doza na iza na iza na te-hiditra an-tsehatra amin'ny ady izy sy ny mpiara-miasa aminy. “Olo-tsotra miezaka manohana ny fianakavianay izahay amin'ny vola kely raisinay amin'ny alalan'ity hetsika ity,” hoy izy.
Mandray anjara amin'ny famongorana ny aretina lefakozatra manerana an'i Balochistan ireo mpilatsaka an-tsitrapo an-jatony tahaka an'i Sajida amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny ireo ankizy latsaky ny dimy taona. Nilaza ny mpandrindra any amin'ny faritany amin'ny Fandaharan'asa Fanitarana ny Fanaovana Vaksiny, Dr. Ishaq Panezai fa ireo mpilatsaka an-tsitrapo no mandrafitra ny ankamaroan'ireo mpanao vakisiny ao amin'ny faritany. “Manofana ireo mpilatsaka an-tsitrapo isaky ny hetsika izahay ary manaraka azy ireo eny ifotony ny manam-pahefana mba hanara-maso ny asa,” hoy i Dr. Panezai.
Tamin'ny taon-dasa, tranga lefakozatra 25 no niseho tao Balochistan - izay ambony indrindra tao anatin'ny telo taona. Nilaza ny loharanom-baovao avy amin'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana eny amin'ny faritany fa tany amin'ireo faritra misy ireo olona misalasala amin'ny fanaovana vaksiny ny zanany no nisehoan'ny ankamaroan'ireo tranga.
Nilaza i Asad Khan, tompon'andraikitra ao amin'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana manaraka ireo ekipan'ny miady amin'ny lefakozatra ao amin'ny Samungli Road fa: “Miatrika olana izahay amin'ny fanaovana vakisiny ny ankizy tsirairay noho ireo olona tsy mety miara-miasa aminay satria mihevitra izy ireo fa miteraka fahamombàna ny vakisiny ary mampiroborobo ny fanaon'ny vahiny izahay.”
Malaza amin'ny fantsona fahitalavitra ny hetsika fanentanana manerana ny firenena ho fanohanana ny vakisiny miaro amin'ny lefakozatra. Misy ny dokambarotra fohy ahitana hafatra avy amin'ireo manampahaizana malaza mangataka amin'ireo ray aman-dreny mba hanao vaksiny ny zanany. Mandritra izany, ao amin'ireo faritra sasany ao ao an-toerana, mihantsy fankahalana amin'ny hetsika fiadiana amin'ny lefakozatra ny imam sasantsasany.
Telo volana monja tao anatin'ny 2015, tranga lefakozatra maherin'ny 20 no niseho. Tao amin'ny distrikan'i Loralai, Qilla Abdullah sy Quetta ao Balochistan ny telo tamin'izany tranga izany. Ny antony lehibe voalazan’ny governemanta dia mbola noho ny fandavan'ireo ray aman-dreny ny ekipa mpitsidika tsy hanao vakisiny ireo zanany.
Nilaza i Akbar Khan (novaina ny anarany noho ny fangatahana), mpandray fisotroan-dronono ao amin'ny distrikan'i Pishin fa manao sorona ny ain'ireo zanany ny olona noho ny zavatra nolazaina tamin'izy ireo fotsiny fa voaràra hoan'ny Silamo ny manao vakisiny ny ankizy.
“Misy ny olona sasany manaparitaka hevi-diso manohitra ny vaksiny hoan'ny ankizy,” hoy i Akbar ary nampiany fa tokony hazavain'ny manam-pahaizana ara-pivavahana ao an-toerana ny raharaha mba ahafahana mamongotra ny aretina.
Araka ny End Polio Pakistan (Fongory ny Lefankozatra ao Pakistan); vondrona mpiara-miasa amin'ny famongorana ny lefakozatra izay ahitana ny OMS (Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana), ny Tahirim-bolan'ny Firenena Mikambana Hoan'ny Ankizy (UNICEF) sy ny governemanta ao Pakistan, nidina avy amin'ny 20.000 herintaona talohan'ny hetsika ka tonga 58 monja ny trangan'ny lefakozatra tamin'ny taona 2012.
Saingy raha niomana hanambara ireo mpiara-miombon'antoka fa firenena afaka amin'ny lefakozatra i Pakistan, niakatra 93 ny isan'ny tranga lefakozatra tamin'ny taona 2013. Amin'ny taona hoavy, mbola hiakatra hatramin'ny 306, isa mampihozongozona izany.
Nitsikera ny fihetsiky ny governemanta ny Komity Mpanara-maso Tsy Miankina (IMB) tamin'ny tatitra navoakany ary nanoro-hevitra mba ho ferana ny fivezivezena ao amin'ny firenena. Nilaza ny tatitra fa tsy ampy ny ezak'i Pakistan hiadiana amin'ny tsimok'aretina ary tsy nahomby tanteraka tamin'ny fanatanterahana ny fampanantenany hamongotra ny lefakozatra ao amin'ny firenena alohan'ny Desambra 2014.
Raha notanisaina ho sakana lehibe amin'ny tolona iadiana amin'ny lefakozatra ny fitolomana sy ny fandavan'ny fianakaviana handray anjara amin'ny vakisiny, ny tsy fahaizan'ny fanjakana no niteraka ny firongatry ny trangan'aretina farany . Ny drafi-pandaminana sy hetsi-panentanana mifanaraka amin'ny zava-misy no ahafahana manampy betsaka amin'ny fanentanana hanohanana ny hetsika famongorana ny lefakozatra ao amin'ny firenena.